Dhallinyarada far-shaxanka oo ku soo badanaya Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Tallaabadan iyo qaar kale waa kuwa dhalinyarada u horseedi kara in ay ka baaqsadaan daruufaha shaqa la’aanta ee waqtigan dalka ka jira.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sawirada Farshaxan Gacmeedka ee uu aadanuhu sameeeyo oo xilliyo hore soo bilawday ayaa udub dhaxaad u ahaa nolosha dad qarniyo kala duwan dunida guudkeeda saarnaa, kuwaasoo uu sawir gacmeedku si toos ah u tilmaami jiray habkii ay u noolaayeen iyo taariikhda waayahoodii.
Sawirada macmalka ah ee looxda lagu xardho ayey inta badan dadka ay mihnadooda tahay ku cabiraan dareenkooda iyo kan bulshada ay la nool yihiin, waxeyse iminka howshan shaqo abuur u noqotay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho.
Dhalinyaradan oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa curiya sawir gacmeedyo ka hadlaya wadaniyadda, dhaqanka, ilaalinta Deegaanka iyo nabada, waxana mararka qaar sawir gacmeedyo ay u sameeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada kadib codsiyo uga yimaada.
Maslax Daahir waa mid ka mid ah dhalinyarada xirfada Arts-ka leh ee ku shaqeysta, waxaana uu ka waramayaa sababaha ku riixay inuu xusho xirfadan, isagoo xusay in ay ahayd han uu ilaa yaraantiisii ku hamin jiray inuu hiigsado mustaqbalka,taasoo sida uu sheegay u suura gashay.
Maslax ayaa tilmaamay in sawirada farshaxanka ee uu sameeyo uu diiradda ku saaro arimaha la xiriira bilicda degaanaka iyo nabadda, kuwaas oo sida uu tibaaxay ah waxyaabaha ay iminka in lagu wacyi galiyo ay tahay bulshada Soomaalida.
Dhalinyaradan oo howshoodu ay u badan tahay is-xilqaan ayaa mararka qaar laga soo dalbada sawir gacmeedyo, kuwaas oo ay ka helaan dhaqaale aan buurneyn, maadaama uu yar yahay fahanka ay Soomaalidu ka heysato qiimaha sawir gacmeedyada.
Tallaabadan iyo qaar kale waa kuwa dhalinyarada u horseedi kara in ay ka baaqsadaan daruufaha shaqa la’aanta ee waqtigan dalka ka jira,waana arin muhiimad gaar ah leh in lagu dhiira galiyo xirfadaha ay abuurteen.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waqtigan u arka in lagama maarmaan ay tahay helidda sawir gacmeedyo ka turjumayo dhaqanka, xoojinta nabada, ilaalinta deegaanka iyo sida ay ahayd nolosha Soomaalidii hore,waana kuwa rumeysan in ay sawir gacmeedyadan ay dhaxal ma guurto ah u noqon doonaan jiilalka danbe.
Xaaladaha amni darro iyo tan shaqa la’aanta ayaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ku xanbaartay in ay raadsadaan meel dhaanta amniga dalkooda, waxana qaarkood ay ku geeriyoodeen badaha halka kuwa kalana ay ku dayacan yihiin qurbaha,iyadoo qeybtoodna ay ku jiraan xabsiyada dunida,halkaasoo waayaha adag ay ku qaabilayaan.
Gudaha Soomaaliya xilligan weli waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dhalinyaradu heli karto, shaqo la'aantuna waa mid aad u sareeysa, hayeeshee, beegsiga dhallintan ee riyooyinkooda ayaa ka dhigan mid dhiira galin karta in kumanaan dhalinyaro ah ay soo bandhigaan hal abuurkooda, taa oo wax ka badali karta daruufaha hubanti la'aaneed ee ku dahaaran dawga noloshooda.